“သွားလိုက်တော့၊ နင်သွားလိုက်တော့” – (ထက်ထက်မိုးဦး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » “သွားလိုက်တော့၊ နင်သွားလိုက်တော့” – (ထက်ထက်မိုးဦး)
“သွားလိုက်တော့၊ နင်သွားလိုက်တော့” – (ထက်ထက်မိုးဦး)
Posted by kai on May 21, 2010 in Critic, Gossip, Rumor, Myanma News | 17 comments
အီလဲဗန်င်းမီဒီယာဂရုက သတင်းကိုဖတ်မိတာပါ။ အဲဒီမှာ ..ဒီလိုရေးပါတယ်..။
အင်တာဗျူးပြုလုပ်ချိန်တွင် မေးခွန်းခုနစ်ခုခန့် မေးပြီးနောက် အဆိုပါသတင်းထောက်က”ပရိသတ်တွေက ပြောကြတယ်၊ ထက်ထက်မိုးဦး ဘ၀ကိုခဏခဏ ပြန်စနေရတယ်၊ အဲဒီဝေဖန်မှုတွေကို အစ်မ ဘယ်လိုခံစားရလဲ”ဟု မေးမြန်းချက် အပေါ်ထက်ထက်မိုးဦးက ”သွားလိုက်တော့၊ နင်သွားလိုက်တော့”ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထို့ကြောင့် သတင်းထောက် မအေးသူစံက သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးအား တောင်းပန်၍ ပြန်ထွက်လာခဲ့ရာ ထက်ထက်မိုးဦးမှာ အပြင်သို့ အရင်ရောက်ရှိနေပြီး သတင်းထောက် မအေးသူစံအား ဤသို့မေးသည်မှာ သူ့အားစော်ကားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မည်သူမေးခိုင်းသလဲ၊ စာနယ်ဇင်းများ၏ နှစ်ပဲတစ်ပြားလစာကို သနားလို့ ဖြေနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပြီး သတင်းထောက်အား ဆံပင်ဆွဲ၍ ပါးရိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
နောက်..အဲဒီမှာ..ကွန်မန်င့်တွေလိုက်ဖတ်ပါတယ်..။ လူတွေအစုံအလင်ရေးထားတာတွေ့ရပေမဲ့..ထူးခြားတာလေးတချို ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတွေ အနှုတ်အများဆုံးပေးထားတာနဲ့..အပေါင်းအများဆုံးပေးထားတာရယ်။ အယ်ဒီတာရဲ့ ကွန်မန်င့်ရယ်ပါ။
”PS . ဒီသတင်းကိုဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မထည့်ဖို့တားထား တယ်လို့သိရပါတယ် ။“
#42 Web Administrator 2010-05-21 13:36
သတင်းအင်တာဗျူးေ တွမှာ ထောက်တဲ့ (Cross Question)ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဖြေတဲ့သူဟာ ကိုယ့်အကြောင်း ကောင်းကြောင်းတွေဖြေရှင်း၊ မဟုတ်တာလုပ်ပြီး သူတော်ကောင်းယော င်ဆောင်နေရင်၊ သူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားဖို့လုပ်ရင် ထောက်တဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒါဟာစော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- CNN က Amanpour တို့ Larry King တို့ Q & A တွေကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ဆိုရင် သာမာန် Celebrity တောင်မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတောင် ဒါကိုဖြေရပါတယ်။ သူတို့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ရင် သူတို့ဟာ မမှန်ကန်တဲ့သူတွေလို့ အများပြည်သူကယူဆ ပြီး သူတို့ပါးနပ်လိမ္မာရင် အပေါင်းလက္ခဏာပြ ကတာပါပဲ။ အခု မြန်မာဂျာနယ်တွေ ၊ မြန်မာစာနယ်ဇင်း တွေရဲ့ အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေမသိပါဘူး။ ထောင်ကျတာ မရှိရင်တောင် ခဏခဏ ခေါ်မေးခံရတာ၊ တရားရုံးမှာ တရားစွဲခံရတာ (အစိုးရဌာနတွေအပါအ၀င်)တရားရုံးအ ကြောင်း နည်းနည်းရေးရင် တရားရုံးမထီမြဲ့ မင်ပြုမှုနဲ့ တရားစွဲခံရတာ (News Watch ကဆိုရင် ထောင်တောင်ကျပါတ ယ်။)
အစိုးရမကောင်ြးေ ကာင်း၊ သူများမကောင်ြးေ ကာင်းရေးရင် သဘောကျပေမယ့် (ကောင်းတာရေးရင် အစိုးရကို ဖားတယ်ပေါင်းစား တယ်လို့ ပြောကြတယ်။)ကိုယ့်အကြောင်းရေးရင်စိတ်ဆိုးကြတာ လူ့သဘာဝပါ။ ဥပမာ-ခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်ကိစ္စရေးတယ်။ အများပြည်သူရဲ့အ ပေါ် ဆရာဝန်တွေဆေးခန်းတွေရဲ့ ဆက်ဆံမှု ပိုကောင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်လောကကအချို့က Eleven အပေါ် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာ ခုထိခံရတုန်း။ မီးလာချိန်ကို စနစ်တကျပေးဖို့ တနင်္လာနေ့ကရေးတယ် ။ လူတွေ အချိန်ပိုင်းမီး ရလာတယ်။ သောကြာနေ့ကစပြီး ရုံးရော ပုံနှိပ်စက်ပါ ၂၄ နာရီ မီးဖြတ်လိုက်တယ် ။
ဖုန်းခိုးပွားတာ တွေကို ကိုယ်တွေ့နဲ့ယှဥ်ပြီးရေးတယ်။ Eleven က ၂၅ သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းနှစ်လုံး မြို့နယ်ပြောင်း တာ စည်းကမ်းနဲ့ မညီလို့ဆိုပြီး ဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ခုထိပြန်မရဘူး။ ဆုံးရှုံးသွားတယ် ။ လူတိုင်းဝယ်လို့ ရတဲ့ ငါးသိန်းတန်ဖုန်းတောင် Eleven ဆိုရင် ၀ယ်လို့မရဘူး။ ကောင်းတာရေးရင် ရေးခံရတဲ့ဌာန၊ လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့က ကျေနပ်တယ်။ မကောင်းတာရေးရင် ဖွတယ်။ ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ ဆိုတယ်။ စာနယ်ဇင်းတွေရဲ့ ပိုင်ခွင့်ကိုကာ ကွယ်ရင် ကျီးကန်းတွေလို့ ကင်ပွန်းတပ်တယ်။ အခုကိစ္စမှာ ထက်ထက်မိုးဦးကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ Eleven Media Group ရုံးရှေ့မှာ မူးယစ်ရမ်းကားဆဲ ဆိုပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမူဖို့ကြိုးစားတဲ့လူကို တရားရုံးက ဒဏ်ငွေ ၅၀၀-၁၀၀၀ ပဲချခဲ့တာပါ။ တရား ရုံးတွေက သတင်းထောက်တွေဘက်မှာ မရှိပါဘူး။ ဒဏ်ငွေပါပဲ။
Eleven ဟာ ကျီးကန်းမဟုတ်ဘူး။ မှန်ရင် အခုထိတစ်ယောက်ထဲ လုပ်လာခဲ့တာပါ။ မှန်တဲ့အတိုင်းပဲရှိပါမယ်။ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ အညီရှိမှပါ။ မကြိုက်တဲ့မေးခွ န်းလေး မေးမိတာနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးရိုက် မိတာနဲ့ အရိုက်ခံရ၊ အဖမ်းခံရ၊ အနှိပ်စက်ခံရဆို တာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဂျာနယ်ရောင်းကော င်းအောင်၊ ငွေရအောင် လုပ်နေတာ သက်သက်မဟုတ်ဘူး။ ဒီနှစ်ပြားတစ်ပဲ ငွေထက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူထုအတွက် လုပ်နေတာ။ သတင်းမီဒီယာတွေကို ခင်ဗျားတို့အားလုံး ကိုယ်ချင်းစာနို င်ကြပါစေ။ သေချာတာက ကျွန်တော်တို့ဆီ မှာ ဒီမိုကရေစီမပြော နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွ င့်နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မရှိ သေးဘူး။ ကျွန်တော်အခုလို ရေးတာ အယ်ဒီတာတစ်ယောက် ရဲ့ ခံစားမှုသက်သက်ပါ ။
PS . ဒီသတင်းကိုဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မထည့်ဖို့တားထား တယ်လို့သိရပါတယ် ။
#37 KuuKuu 2010-05-21 11:43
မေးတဲ့သူအရမ်းလွ န်ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးဆိုတာ အနုပညာ ရှင်ဖြစ်ပေမယ့် သူလဲမိန်းမသားတစ်ဦးပါ..
မေးတဲ့သူက မိန်းကလေးချင်းမို့ ပိုစာနာသင့်ပါတယ်၊ သူများရှေ့မှာ မျက်နှာရေနဲ့ပက် တာမျိုးနဲ့ဘာမှမ ထူးတဲ့မေးခွန်းပါ..
ထက်ထက်မိုးဦးမို့သာ ပါးဘဲရိုက်တာ… ကျေးဇူးတင်ရမယ်..
ဒါပေမယ့် စာနယ်ဇင်းသမားတွေဘာညာ..ပြောတာတော့ နဲနဲလွန် ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း သူအရမ်းရှက်ပီး ထူပူပီး ပြောမိတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်..
အဲဒီ သတင်းထောက်အမျိုးသမီး မေးခွန်းကို ကျွန်မသာဆို ဒီထက်တောင်ပိုလု ပ်မိလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူမှ အဲလိုဘ၀မျိုးရွေးချယ်ခဲ့မှာလဲ.. ဖြစ်လာတဲ့အခြေနေ ကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အ ခက်ခဲကြားမှာအဲလို အမေးခံရတာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားတာထက်ပို ပြင်း ထန်ပါတယ်။
#1 နေလင်းအောင် 2010-05-20 21:42
မပြောတတ်တော့ဆဲသ လိုတဲ့။ ကာလံသေဒံမကြည့်ဘဲမေးသူကမေး။ ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်ဘဲရိုက်သူကရိုက်။ အမှု့နိုင်နိုင် ရှုံးရှုံး သတင်းထူးတော့ရတာ ပေါ့။ မောင်ကိုကို(စက် မှု့တကသိုလ်)တို့ ကတော့ အောင်မြင်ဦးမယ် ။ အခန့်မသင့်ရင်ဆန်းဒေးတော့မှာတော င်ထည့်ဆွေးနွေးဦးမလားပဲ။သတင်းစာပညာမှာ stupid question ဆိုတာမရှိပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်သတင်းသ မား ဆရာ၊ ဆရာမလေးတွေ မေးနေတဲ့မေးခွန်းတွေမှာstupid question တွေကတော့ အများသား။
#2 yan naing myo 2010-05-20 21:46
Let’s not forget celebrities are humans too. I hope the Burmese media will deal with this issue fairly and on humanitarian ground. Hopefully, neither party tries to exaggerate this matter and makeamountain out ofamolehill.
This time,acelebrity has insultedajournalist. But, there have been many cases journalists insulted celebrities (e.g., Lay Phyu had to bear with stupid and bull***t questions from journalists so many times).
Htet Htet is wrong this time. No argument on that. But how about many previous cases whereas journalists insulted and exploited people under the cover of media license and the journalists’ rights?
Whenadog bitesaman, that is not news. Whenaman bitesadog, that becomes news. Now, there is news. Let’s wait and see how Burmese media will respond.
လွန်တယ်တော့မပာုတ်ပါဘူး ။ လူမှုေ၇းအရ ဆိုရင်တော့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ ဒါမမေးသင့်ဘူးပေါ့လေ ။ သတင်းထောက်ဆိုတာကတော့ မေးစရာရှိ၇င်မေးမှာပါပဲ ။
စကားလုံးအသုံးအနှုန်းလေးတော့လည်း လိုတာပေါ့။ သူကလည်း အမျိူးသားတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး နာမည်မကောင်းခဲ့ တာ ၊ သတင်းဆိုးတွေရှိခဲ့ တာဆို တော့
အနာပေါ်ဒုတ်ကျဖြစ်မှာပေါ့လေ။ သို့ သော် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပိာုတယ်လို လူစုံတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဒါမျိူးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့
အကျိူးဆက်တွေကို မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင်ဒေါသဖြစ်သွားတာနေမှာပေါ့လေ ။ သတင်းအနေနဲ့ကတော့ လူထုမသိအောင် ပိတ်သင့်တဲ့ပာာမျိူးတော့မပာုတ်ပါဘူး
lee pae ! phar thal ma parr cha tar khan ya tar ko , bar ma pyan malote naing yin myanmar naing ngan ka tayarr thu gyi twae lee pae kwar. lee pae lee pae
min amay sat pat main kha lay par lar. bar main kha lay lae. bar ar nae thu lae. phin pat khan nay taet phar thal ma ko. U ko ko yay , nout ta khar myanmar pyi ka phar thal ma twae (na ar pha hmyout pay htar taet anu pyin nyar shin twae) ko byuu mal so yin thu toet naet tu taet phar thal ma journalists twae hngarr htarr phote taut lo laint mal.
သတင်းထောက်ဆိုတာကတော့မေးမှာပဲလေ ။ အရိပ်ကဲသုံးပါးတော့နားလည်ရမှာပေါ့ ။ သူ့ဘာသာလင်တစ်ရာယူယူ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတော့မမေးသင့်ဘူးလေ ။ သတင်းထောက်မမေးတာနဲ့ ပြည်သူတွေမသိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့အကြောင်းကိုဘာလုံးအသိပဲလေ ။ တူအရွယ် ၊ သားအရွယ် ကောင်လေးနဲ့တောင်ပတ်သတ်လိုက်တယ် ။ ဘာတဲ့… သူများပြောတဲ့ သူ့နာမည် က ခြင်ထောင် ဆိုလားပဲ ။ မင်းသမီးကလည်း တခြားနည်းနဲ့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်လေ ။ အဲ့ဒီလို ကိုယ်ထိလက်ရောက်မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ လူဆိုတာ ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံရှိရှိပါ မွေးရာပါဗီဇကတော့ ဖုံးဖိလို့မရပါဘူး ။ နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး အရေခြုံနေထိုင်နေကြတာ ။ နောက်တော့လည်းစိတ်ရင်းမှန် နဲ့ စရိုက်က ပေါ်လာတာပဲ ။ သတင်းထောက်ဘက်က တရားစွဲထားတယ်ကြားတယ် နော် ။
ကဲ တရားသူကြီးတို့ရေ …. ငွေများတရားနိုင်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူး အမှန်တိုင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။
လူတွေကိုအကျိူးပြုတဲ့သတင်းဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်၊ ဘာမဟုတ်တဲ့သတင်း အတွက်တော့ ဒီလောက်ထိပုံကြီး မချဲ့သင့်ပါဘူး။ နှစ်ဘက်စလုံး နစ်နာပြီး ပြည်သူတွေအတွက် တော့ ဘာမှ ထူးမလာပါဘူး။
ကျွန်တော့အမြင်ကတော့ဘယ်သူ့မှာ မှ အပြစ်မရှိဘူးလို့မြင်တယ်လေ.. လွန်တာတော့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့ …
ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်းတဲ့သူကတော့ ပိုမယ်ထင်တာပေါ့..စဉ်းစားကြည့်လေ.. ..
လူတစ်ယောက်ကိုလက်နဲ့ သေစေခဲ့တယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုဥပဒေ ဘယ်လိုလူမျိုးမှာ မဆို ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာ ရှိတယ်…
လူတစ်ယောက်ကို နှုတ်နဲ့ သေစေခဲ့တယ် ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဥပဒေမှာ မှ ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူး….
လူသတ်တာချင်းအတူတူပဲ ..လူတစ်ယောက်ကြောင့် လူတစ်ယောက်ပျက်ဆီးတာချင်းလဲ အတူတူပဲ ..
ဘာလို့ အပြစ်ချင်းက မတူကြတာလဲ….တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ ဥပဒေတွေ စည်းကမ်းတွေဆိုတာက လူတွေကလုပ်ယူလာခဲ့
ကြတာပါပဲလေ…မင်းအယူအဆနဲ့ ငါ့အယူအဆ ဘယ်ဟာက မှန်ကန်မလဲ အများစုက မှန်ကန်မယ် လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ တင် အမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ..
အဲလိုကွဲပြားတဲ့ စိတ်တွေ အတွေးအခေါ်တွေ ရှိနေလို့လဲ လူမျိုးစုတွေရယ်လို့ကွဲပြားနေတယ်လို့ ယူဆတာပဲ … လူဆိုတာတော့လူပါပဲလို့ ကျွန်တော်က
ယူဆတယ်… အဲဒါကကော ကျွန်တော်မှန်မလား…..??????????
အခုကိစ္စမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်သူကတော့ မှားတယ်လို့ ယူဆနိုင်တယ်…. သူကလက်နဲ့ လူသတ်သူပေါ့..
သူကလက်ပါသွားတာကို ဟိုဘက်က နှုတ်နဲ့ သူမခံစားနိုင်လောက်တဲ့မေးခွန်းကို မေးတာ ဟာ နှုတ်နဲ့ လူသတ်သူပေါ့..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူသတ်တာချင်းကတော့အတူတူ ပဲမို့ နှစ်ယောက်လုံး အမှားကိုယ်စီလုပ်ခဲ့ကြတယ် လို့ ကျွန်တော့်အမြင်ကိုတင်ပြပါတယ်…
ဒီလိုတော့တည့်တိုးကြီးမမေးသင့်ပါဘူး … ဒါမျိုးမေးတော့ ဘယ်သူမဆို အနည်းနဲ့အများတော့စိတ်းဆိုးမှာပေါ့ … နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ဒီလောက်ထိလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက်မလုပ်သင့်ပါဘူး ….
All for team member, this htet htet moe oo is how big deal for us. :(. Actually that is not our problem and htet htet moe oo is nothing for me also. For reading that article , what we got, anger and just nonsense. I don’t care who she is , she doing nothing for our people. So, i believe who is wrong or right is not our problem.
Weekly Eleven ကို CNN နဲ့ မနှိူင်းပါနဲ့ မတန်ပါဘူး ၊ အဆင့်ချင်းလည်း မတူပါဘူး။ ထက်ထက်မိုးဦး ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေတွေ အမတွေ၊ ညီမတွေ၊ တူမတွေ၊ အဒေါ်တွေ၊ အဖွားတွေကို လာမေးရင်ကော ပြုံးပြီးဖြေနိုင်မှာလား…. မေးတဲ့စောက်ကောင်မကလည်း မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ်…
သူ့ဖာသာသူ ယူနိုင်လို့ယူတာကို… နင်ကမရလို့ မနာလိုနေတာလား… နင့်အဆင့်နဲ့ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို မေးဖို့တန်လို့လား… စောက်ကောင်မ အေးသူစံ… နင့်အဆင့်နင်သိ… ကိုယ့်ခြေအနေကို ကိုယ်နားလည်အောင်လုပ်….
ထက်ထက်မို့လို့သာ ပါးပဲရိုက်တာ… ကောင်မ… ငါသာဆို နင့်ကို အသေသတ်ပစ်မှာ… ကောင်မ လမ်းမှာ ငါတို့အဖွဲ့နဲ့ မတွေ့အောင်ကြည့်ရှောင်… တွေ့လို့ကတေ့ာ နှစ်ခြမ်းဖြဲပြီး ဆားသိပ်မယ်… သတိတာထားပြီးနေ… အပြင်ကို တစ်ယောက်တည်း မသွားနဲ့ ကောင်မ….
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဂျာနယ်ရောင်းကော င်းအောင်၊ ငွေရအောင် လုပ်နေတာ သက်သက်မဟုတ်ဘူး။ ဒီနှစ်ပြားတစ်ပဲ ငွေထက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူထုအတွက် လုပ်နေတာ။ သတင်းမီဒီယာတွေကို ခင်ဗျားတို့အားလုံး ကိုယ်ချင်းစာနို င်ကြပါစေ။ ကျွန်တော်အခုလို ရေးတာ အယ်ဒီတာတစ်ယောက် ရဲ့ ခံစားမှုသက်သက်ပါ ။
ဒါဆိုရင်ဂျာနယ်ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေနဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းတာလုပ်ပေးတာ ဘာရှိလဲ… ကိုယ့်ဂျာနယ်လစ် အချိုးမပြေတာ သူများကို အပြစ်မဖို့ပါနဲ့….
ဒါဆိုရင် Elevenက ထက်ထက်မိုးဦးဘ၀နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်တာ ပြည်သူလူထုအတွက် ဘာကောင်းကျိုးရှိလို့လဲ… ကိုယ့်ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းဖို့အတွက် လုပ်တာကို ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မတက်ပါနဲ့…. ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းပါ… သူများအိမ်ထောင်ရေး မကောင်းကြောင်းကို စာမျက်နှာပေါ်တင်ပြီး စီးပွားမရှာချင်ပါနဲ့… အဲဒီအစား ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် သတင်းတွေကို ရေးပေးတာ ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်….
in my option , Htet Htet Moe Oo is not Celebrity. if she will accept celebrity. she should not do like this habit. Her Habit is so naughty.
Journalist Aye thu san shouldn’t ask these question…she should think of other’s feeling cuz she is Buddhist Myanmar girl..how aye thu san gonna feel when she was ask the same question when she is in Htet htet’s position……i think that’s damn big rude !!!!
ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့အနုပညာစမ်းက ဒီမှာတင်ကုန်သွားပါပြီ…..နယ်ပရိတ်သတ်ကတောင် ဒီသတင်းကြောင့် သူမကို အားမပေးတော့ပါ….ယုံလိုက်ကြပါဗျို့….။
လူဆိုတာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ
ဂျာနယ်လစ်က မေးလည်း မဖြေချင် မဖြေ လို့ရတယ်
မေးသူကလွန်တယ် ဆိုဦးတော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားတာ ရှုံချပြောဆိုတာ ဟာ မင်းသမီးတစ်ယောက်အတွက် မပြောနဲ့
ဘယ်သူတစ်ယောက်ဆီ မှာမှ မရှိနေဘူး
ဒါ က တစ်ဘက်သားရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ
“ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေတွေ အမတွေ၊ ညီမတွေ၊ တူမတွေ၊ အဒေါ်တွေ၊ အဖွားတွေကို လာမေးရင်ကော ပြုံးပြီးဖြေနိုင်မှာလား…. မေးတဲ့စောက်ကောင်မကလည်း မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ်…“
ဒီအယူအဆ က ထင်ရာမြင်ရာ လျှောက်ပြောတဲ့ အရူးချေးပန်းအဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်
ရေးတဲ့သူ က ပညာမတတ်ရင်လည်း မတတ် ဒါမှ မဟုတ် ထမင်းစားကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက် ဟုတ်ပါ့မလားဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာပါ။
မေးတဲ့မေးခွန်းက အစွန်းမလွတ် ပါဘူး
ဂျာနယ်လစ်ဆို ကတည်းက လွတ်တာကော မလွတ်တာကော မေးတတ်တယ် သူ့သဘာဝ ကိုယ်က မေးလေ့ရှိတယ်ဆို တာ အခြေခံပညာ လောက်တတ်ရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်
လူမသိသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆို ဘယ်သူလာစိတ်ဝင်စားမှာလဲ။
ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင် ဒီမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်ဘဲ ကိုယ်နာမယ်မရှိခင်က ဖန်တီးယူခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလား?
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသာ သာမာန်လူလို မြန်မာအမျုိးသမီးလို နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူလာပြီးစိတ်ဝင်စားမှာလဲ?
လင်ယူသားမွေးကိစ္စမှာလဲ မြန်မာအမျိုးသမီးများလို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နေခဲ့ရင်ကောသည်လိုဖြစ်မှာလား?
အဆင်မပြေလို့ဖြစ်စေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေအခုလို သာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ယူပြမနေဘူးဆိုရင် သည်မေးခွန်းလဲပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါ။
မေးလာရင်တောင် သည်မေးခွန်းကို မဖြေဘဲရှောင်နေရင်ကောရနိုင်ပါတယ်။
မေးသူက မှားရင်တောင် ယဉ်ကျေးစွာငြင်းပယ်ရမှာ ပြည်သူအချစ်ရမှ ထမင်းစားနေရသောသူများအလုပ်ပါ၊
”ပရိသတ်တွေက ပြောကြတယ်၊ ထက်ထက်မိုးဦး ဘ၀ကိုခဏခဏ ပြန်စနေရတယ်၊ အဲဒီဝေဖန်မှုတွေကို အစ်မ ဘယ်လိုခံစားရလဲ”အခုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသာမေးတာမှန်ခဲ့ရင် သည်လောက်ပေါက်ကွဲစရာမရှိပါ။
အမေးမခံနိုင်ရင် စကတည်းက ဆင်ခြင်နေပါ။
မင်းသမီးရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး အားလုံးက လူတွေပဲ ဆိုတော့ လူ့ခံစားချက်တော့ ရှိကြတာပေါ့ ထက်ထက်လည်း လူပဲလေ ထက်ထက်နေရာမှာ ငါဆိုလည်း လုပ်မိမှာပဲ တလင်ကွာပြီးမှ တလင်ပေါင်းတာပဲ နှစ်လင် သုံးလင် တပြိုင်တည်းပေါင်းတာမှ မဟုတ်တာ မမေးသင့်ဘူး